Beenaale Daahir Calasaw (waagacusub.com) oo daadku qaadey kadib markii uu daan daansaday warbaahinta xortaa ee xaqiiqada tatbisa. War Deg Deg ah: Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin oo Jihooyin kala gedisan kasoo galay magaalada Dhoobleey iyo Gaadiid ay ka carareen Maleeshiyadii Axmed Madoobe oo laga heley Howdka Dhoobleey. SomaliMeMo oo heshay shax Milateri oo ay dejisay AMISOM si ay ugu qabsato magaalada Muqdisho iyo ciidamo taabacsan DKMG-ka oo si qarsoodi ah ku jooga deegaanada ay Mujaahidiintu ka maamulaan magaalada Muqdisho.(Warbixin dheer oo Xasaasi ah).	Mu'assasada Al-Kataaib oo soo saartay filim cusub oo heer sare ah kana waramaya dagaalladii ugu dambeeyay Muqdisho. Beesha Harti daarood oo Beyco la gashey Wilaayada islaamiga ah ee jubooyinka.	Wilaayada Jubooyinka iyo Beesha Absame oo Mubaayaco galey.	Isku soo bax aad u ballaaran oo looga soo horjeedo Duullaanka Gaalada laguna Taageerayo Mujaahidiinta oo maanta Muqdisho ka dhacay(Daawo Sawiro+Cod).	Walaalkeen Sheikh Mohamed Umal weydiiya wadaad diintii laga bililiqaystay ?? Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab oo Dagaal kula wareegay gacan ku haynta degmada Shibis oo ay horay u joogeen Maleeshiyaadka Xukuumada Ridada. Talo Ku Socota Amiirka Mujaahidiinta Al-shabaab	Meydka wiil da’yar oo lagala baxay Xubnaha ugu muhiimsan jikiisa oo lasoo dhigay meel udhow garoonka diyaaradaha Aadan Cadde.
Posted on March 30, 2010 by halganka	Dhaco kamid ah dhacdooyinka ugu xanuunka badan ee ka dhaca Magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu arkay Xaafadda buulo buuxay degmada wadajir ee gobolka Banaadir kadib markii dadka deegaanka Xaafadaasi ay maanta arkeen Meydka wiilka da’yar oo sida muuqanaysay lagala baxay Xubnaha ugu muhiimsan jirkiisa,kaasi oo lasoo dhigay agagaarka garoonka diyaaradaha Aadan Cadde.
Filed under: Uncategorized « Mooryaan Xeefoow oo ku soo fashilmay kulankii Caabudwaaq Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab oo Dagaal kula wareegay gacan ku haynta degmada Shibis oo ay horay u joogeen Maleeshiyaadka Xukuumada Ridada. »